Ranitidine vs Omeprazole: fahasamihafana lehibe sy fitoviana - Zava-Mahadomelina Vs. Namana | Desambra 2021
Fialam-Boly Pets Lalao News Zava-Mahadomelina Vs. Namana Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fiaraha-Monina Fahasalamana Ny Fizahana Wellness Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Biby Fiompy Community, Company
Tena >> Zava-Mahadomelina Vs. Namana >> Ranitidine vs Omeprazole: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Ranitidine vs Omeprazole: fahasamihafana lehibe sy fitoviana
Ny fivarotam-panafody lehibe dia nisintona ranitidine tamin'ny talantalana. Vakio bebe kokoa momba ny fampahatsiahivana Eto .
Ranitidine sy omeprazole dia fanafody roa ampiasaina hitsaboana aretin'ny reflux gastroesophageal (GERD) ankoatry ny aretina fandevonan-kanina hafa. Na dia samy afaka mitsabo olana mitovy aza izy ireo dia samy miasa amin'ny fomba samihafa. Ranitidine dia mampihena ny famokarana asidra vavony amin'ny alàlan'ny fanakanana ny histamine, molekiola iray ilaina amin'ny paompy asidra. Omeprazole kosa dia miasa amin'ny alàlan'ny fanakanana mivantana ireo paompy asidra ao amin'ny vavony. Ireo fanafody roa ireo dia samy manana ny fitoviana sy ny fahasamihafana maro izay horesahina manaraka kokoa.
Ranitidine dia anarana mahazatra na simika an'ny Zantac. Izy io dia antagonista histamine H2 izay aseho amin'ny fitsaboana ny fery duodenal, fery amin'ny gastric, esophagitis erosive, gastroesophageal reflux disease (GERD), ary ny fepetra hypersecretory toy ny Zollinger-Ellison syndrome. Ny vokatra antisecretory dia mitranga ao anatin'ny 4 ora miaraka amin'ny fanamaivanana soritr'aretina tsapa ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fitantanana.
Ranitidine dia misy 75 mg, 150 mg, na takelaka am-bava 300 mg ary kapila vava 150 mg na 300 mg. Azo alaina ihany koa ho toy ny vahaolana am-bava 15 mg / 1 mL ary syrup ary vahaolana 25 tsindrona 25 mg / 1 mL. Ny vovoka am-bava anarana ho an'ny fampiatoana dia azo omena ihany koa. Ranitidine dia matetika dosed indray mandeha na indroa isan'andro na dia mety hahatratra 4 heny isan'andro aza ny doka. Mety ilaina ny fanitsiana dosie amin'ireo izay manana fahasembanana amin'ny aty na ny voa.
Omeprazole (Inona ny Omeprazole?) No anarana mahazatra an'ny Prilosec. Voasokajy ho mpanakana paompy proton izay manakana ny paompy asidra ao an-kibo mba hampihena ny tsiranoka asidra. Toy ny ranitidine, dia asiana fitsaboana ny fery duodenal, ny toetran'ny hypersecretory, ny vavony gastric, ny esophagitis erosive ary ny GERD. Ho fanampin'izany, izy io koa dia afaka mitsabo ny aretin'i H. pylori sy ny esofagà an'i Barrett.
Omeprazole dia metabolaly be ao amin'ny atiny miaraka amin'ny vokatra antisecretory mitranga ao anatin'ny 1 ora aorian'ny fitantanana sy ny vokatra tanteraka hatramin'ny 72 ora.
Omeprazole dia misy amin'ny takelaka am-bava miadana 20 mg ary koa ny kapila am-bava 10 mg, 20 mg, na 40 mg nahemotra. Misy vovoka am-bava 2 mg / 1 mL ho an'ny fampiatoana ihany koa. Omeprazole dia azo doka indray mandeha na indroa isan'andro manomboka amin'ny 2 ka hatramin'ny 8 herinandro na lava kokoa aza arakaraka ny fepetra voatsabo. Ny dosis dia mila ahena amin'ny olona marary saina.
Te hanana ny vidiny tsara indrindra amin'ny Omeprazole?
Misorata anarana amin'ny fampandrenesana ny vidin'ny Omeprazole ary fantaro rehefa miova ny vidiny!
Ranitidine sy omeprazole dia safidy roa fitsaboana amin'ny toetran'ny digestive. Ny fitoviana sy ny tsy fitovizany dia hita ao amin'ny tabilao fampitahana etsy ambany.
Aretina reflux gastroesophageal (GERD)
Aretina H. pylori
Ny atin'ny Barrett
Inhibitor Pump Pump
Ranitidine no anarana mahazatra
Omeprazole no anarana mahazatra
Takelaka am-bava, famotsorana tara
390 isaky ny takelaka 60 (150 mg)
54 (isaky ny takelaka 30)
Ranitidine dia ao amin'ny sokajy faha-bevohoka B. Tsy mety hitera-doza ho an'ny foetus izany. Manantona dokotera momba ny dingana tokony hatao raha mikasa ny fitondrana vohoka na fampinonoana.
Omeprazole dia ao amin'ny sokajy bevohoka C. Tsy ampy ny fikarohana natao tamin'ny olombelona. Manantona dokotera momba ny dingana tokony hatao raha mikasa ny fitondrana vohoka na fampinonoana.
Ranitidine sy omeprazole dia fanafody roa mitovy amin'ny fitsaboana olana ara-pandevonan-kanina. Na dia samy mitsabo ny toe-javatra toy ny GERD sy ny Zollinger-Ellison Syndrome aza izy ireo, dia samy hafa ny simika. Ranitidine dia miasa toy ny histamine blocker raha omeprazole kosa dia miasa ho toy ny proton pump proton.
Ireo fanafody roa ireo dia azo vidiana amin'ny alàlan'ny fanafody na amin'ny takelaka. Na izany aza, omeprazole OTC dia atolotra ho an'ny olona 18 taona no ho miakatra. Ranitidine OTC dia atolotra ho an'ireo 12 taona no ho miakatra. Omeprazole dia mety aleony amin'ny toe-javatra sasany toy ny aretina H. pylori raha ranitidine kosa dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana fohy kokoa. Ranitidine koa dia misy formulas betsaka kokoa noho ny omeprazole.
Na inona na inona fahasamihafana misy eo aminy, ny ranitidine sy ny omeprazole dia miteraka voka-dratsy mitovy amin'ny aretin'andoha, aretin-kibo ary fivalanana. Ny Omeprazole dia mety tsy dia miteraka toe-javatra ratsy kokoa toa ny aretina C. diff.
Zava-dehibe ny mifanakalo hevitra momba ny toe-pahasalamanao ankapobeny sy ny fanafody hafa miaraka amin'ny dokoteranao mba hahitana ny safidy fitsaboana tsara indrindra ho anao.
Coumadin vs. heparin: fahasamihafana, fitoviana ary iza no tsara kokoa aminao
aiza no ahafahanao mahazo fitsaboana tsy miteraka maimaimpoana
azoko entina amin 'ny drafitra hatrany
efa lany daty sanitizer tanana mbola tsara ampiasaina
ny fomba fampiasana tongolo lay hanasitranana aretina misy masirasira
afaka misotro mialoha sy misotro toaka ve ianao
ny fomba fanalana ny marika hoditra mena
hafiriana aorian'ny fihinanana acetaminophen no ahafahako mandray ibuprofen